DF Somalia oo warbixin ka soo saartay xaalada Afgooye - Caasimada Online
Home Warar DF Somalia oo warbixin ka soo saartay xaalada Afgooye
DF Somalia oo warbixin ka soo saartay xaalada Afgooye
Afgooye (Caasimada Online) – Warbixin ka soo baxday wasaaradda gargaarka iyo maareynta musoobooyinka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu faah-faahiyey saameynta ka dhalatay fatahaadda uu webiga Shabelle ka sameeyey gobolka Sh/Hoose.
Qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in boqalaal qoys ay ka barakaceen degmada Afgooye iyo deegaanada hoos yimaada, kadib markii uu ku fatahay webiga.
Sidoo kale warbixintan ayaa lagu sheegay in magaalada Afgooye kaliya ay ka barakaceen illaa 300 Qoys, halka tuulooyinka Irdoole, Balbaley, Ballow, Jambaluul, Mareeray, Sabiib iyo Caanoole ay guryahooda ka baxeen illaa 1500 oo Qoys.
Waxa kale oo ay wasaaradda gargaarka shaacisay inay jirto cabsi ka taagan deegaanka Janaale iyo tuulooyinka Dagwariiri, Cadiimoole, Awdheegle, Waagaadi iyo Mishaani.
WARBIXINTA FATAHAADA DEEGANADA GOBOLKA SH/HOOSE
MUQDISHO, Soomaaliya, Sabti, 19
KA July 2020: Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelada Hoose iyo deeganada hoos
yimaada waxaa ku fatahay Wabiga Shabeele kaas oo saameeyn xoogan ku yeeshay Dad gaaraya 300 qoys oo ku nool
Sidoo kale waxa jira deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeelada hoose gaar ahaan deegaanada ku teedsan Deegaanka
Janaale kuwaas oo laga cabsi qabo in ay fataahad ka dhalato walow saameen u geeysatay roobka xagaaga ee hada da’aya.
ayaa inta badan fatahaada wabiga saameysaa, Dadka dagan Gobolka aan kor kusoo xusnay ayaa inta badan ku tiirsan tacabka
gargaarka ee ay fatahaadahani saameeyeen.
Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka waxey si dhaw ula socotaa xaaladda fatahaadda waxeyna idiin soo
gudbineysaa waxa soo kordha iyo sida ay isu baddesho xaaladda.